အဓိပ္ပာယ်နှင့်အသုံးပြုခြင်း: Quantiles နားလည်ခြင်း
ထိုကဲ့သို့သောပျမ်းမျှအဖြစ်အနှစ်ချုပ်စာရင်းဇယား ပထမဦးဆုံး quartile နှင့်တတိယ quartile အနေအထားများတိုင်းတာကြသည်။ ဤအနံပါတ်များကိုဘယ်မှာဒေတာမုသာစကားများဖြန့်ဖြူးနေတဲ့သတ်မှတ်ထားသောအချိုးအစားညွှန်ပြထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, ပျမ်းမျှစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်ရှိအချက်အလက်များ၏အလယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ ဒေတာ၏ထက်ဝက်လျော့နည်းသည့်ပျမ်းမျှထက်တန်ဖိုးများရှိသည်။ အလားတူပဲ, အချက်အလက်များ၏ 25% လျော့နည်းပထမဦးဆုံး quartile ထက်တန်ဖိုးများများနှင့်အချက်အလက်များ၏ 75% လျော့နည်းတတိယ quartile ထက်တန်ဖိုးများရှိသည်။
ဤအယူအဆယေဘူယျနိုင်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့တလမ်းတည်းဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဖြစ်ပါသည် percentile ။ အဆိုပါ 90 ရာခိုင်နှုန်းဟာအချက်အလက်များ၏ 90% ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းဒီနံပါတ်ကိုထက်တန်ဖိုးများရှိသည်ဘယ်မှာအမှတ်ဖော်ပြသည်။ ပိုများသောယေဘုယျအားဖြင့်, ထို p ကြိမ်မြောက်ရာခိုင်နှုန်းအရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဎအဆိုပါအချက်အလက်များ၏ p% ဎထက်လျော့နည်းသောအရာဖြစ်သည်။
စဉ်ဆက်မပြတ်ကျပန်း Variables ကို
ပျမ်းမျှ, ပထမ quartile နှင့်တတိယ quartile ၏အမိန့်စာရင်းဇယားပုံမှန်အားဖြင့်ဒေတာများတစ် discrete အစုံနဲ့ setting ကိုစတင်မိတ်ဆက်နေကြသော်လည်း, ဤစာရင်းဇယားကိုလည်းစဉ်ဆက်မပြတ်ကျပန်း variable ကိုများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်အဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍကိုအသုံးပြုဖို့တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်ကတည်းက။ ရာခိုင်နှုန်းကြိမ်မြောက်အဆိုပါ p တစ်အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဎထိုကဲ့သို့သောကြောင်း:
∫ - ₶ဎ,f(x) အဖွဲ့ dX = p / 100 အ။
ဤတွင်,f(x) အဖွဲ့တစ်ဖြစ်နိုင်ခြေသိပ်သည်းဆ function ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးအဘို့အလိုကွောငျးဆိုရာခိုင်နှုန်းရယူနိုင်သည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြန့်ဖြူး။
တစ်ဦးကထပ်မံ General ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိန့်စာရင်းဇယားကျွန်တော်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသောဖြန့်ဖြူးကွဲကြသည်ကိုသတိပြုပါရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါပျမ်းမျှဝက်အတွင်းသတ်မှတ်ဒေတာကိုစူးနှင့်ပျမ်းမျှ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြန့်ဖြူး၏ 50 ရာခိုင်နှုန်းဧရိယာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဝက်အတွင်းဖြန့်ဖြူးကိုစူး။ ပထမဦးဆုံးအ quartile, ပျမ်းမျှ နှင့်တတိယ quartile တစ်ဦးချင်းစီအတွက်တူညီတဲ့အရေအတွက်နှင့်အတူလေးအပိုင်းပိုင်းသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာ partitioner က။ ကျနော်တို့ 25, 50 နဲ့ 75 ရာခိုင်နှုန်းရရှိရန်အထက်ပါအဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍကိုသုံးခြင်းနှင့်ညီမျှဧရိယာ၏လေးဝေမျှသို့စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြန့်ဖြူးခွဲနိုင်ပါတယ်။
ငါတို့သည်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းယဘေုယနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နှင့်အတူစတင်နိုင်ပါသည်သောမေးခွန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်အညီအမျှအရွယ်အစားကိုအပိုင်းပိုင်း n သို့ variable ကို၏ဖြန့်ဝေခွဲနိုင်ပုံကို, သဘာဝအရေအတွက်ကပေးသောဎသလဲ? ဤသည် quantiles ၏စိတ်ကူးကိုတိုက်ရိုက်ပြော၏။
အဆိုပါကြားကာလ 1 တန်းတူ space အချက်များ - ဒေတာအစုများအတွက်ဎ quantiles နိုင်ရန်အတွက် data တွေကိုအဆင့်, ပြီးတော့ဎတဆင့်ဒီအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကွဲနေဖြင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တွေ့ရသည်။
ကျွန်တော်တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ကျပန်း variable ကိုများအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေသိပ်သည်းဆ function ကိုရှိပါကကျနော်တို့ quantiles တွေ့ရှိရန်အထက်ပါအဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍကိုအသုံးပြုပါ။ ဎ quantiles, ကြှနျုပျတို့လိုခငျြ:
ထိုသို့လက်ဝဲဖို့ဖြန့်ဖြူး၏ဧရိယာ၏ 1 / ဎရှိသည်ဖို့ပထမ။
ထိုသို့လက်ဝဲဖို့ဖြန့်ဖြူး၏ဧရိယာ၏2/ ဎရှိသည်ဖို့ဒုတိယ။
ထိုသို့လက်ဝဲဖို့ဖြန့်ဖြူး၏ဧရိယာ၏, r / n ရှိသည်ဖို့အဆိုပါ r ကိုကြိမ်မြောက်။
အဆိုပါရှိသည်ဖို့နောက်ဆုံး (ဎ - 1) / ဎကလက်ဝဲဖို့ဖြန့်ဖြူး၏ဧရိယာ၏။
1 - ကျနော်တို့မဆိုသဘာဝအလျောက်အရေအတွက်ဎ, အဎ quantiles r ကို 1 ကနေဎမဆိုသဘာဝအလျောက်အရေအတွက်ကိုနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ 100, r / n ကြိမ်မြောက် percentile, နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကြည့်ပါ။
quantiles အချို့အမျိုးအစားများကိုသီးခြားအမည်များရှိသည်ဖို့လေ့အလုံအလောက်အသုံးပြုကြသည်။ အောက်တွင်ဤအများစာရင်းကိုသည်:
အဆိုပါ2quantile ဟာပျမ်းမျှဟုခေါ်သည်
အဆိုပါ3quantiles terciles ဟုခေါ်ကြသည်
4 quantiles quartiles ဟုခေါ်ကြသည်
5 quantiles ငါးပုံအုပ်စုဟုခေါ်ကြသည်
6 quantiles sextiles ဟုခေါ်ကြသည်
အဆိုပါ7quantiles septiles ဟုခေါ်ကြသည်
အဆိုပါ 8 quantiles octiles ဟုခေါ်ကြသည်
အဆိုပါ 10 quantiles deciles ဟုခေါ်ကြသည်
အဆိုပါ 12 quantiles duodeciles ဟုခေါ်ကြသည်
အဆိုပါ 20 quantiles vigintiles ဟုခေါ်ကြသည်
100 quantiles percentile ဟုခေါ်ကြသည်
အဆိုပါ 1000 quantiles permilles ဟုခေါ်ကြသည်
သင်တန်း၏, သည်အခြား quantiles အထက်ပါစာရင်းထဲတွင်မြားကျော်လွန်တည်ရှိ။ အသုံးပြုသောအကြိမ်ပေါင်းများစွာတိကျတဲ့ quantile တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ထံမှနမူနာ၏အရွယ်အစားကိုက်ညီ ဖြန့်ဖြူး ။
ဒေတာအစုတခုများ၏အနေအထားသတ်မှတ်ခြင်းအပြင် quantiles အခြားနည်းလမ်းအထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးသောလူဦးရေကနေရိုးရှင်းတဲ့ကျပန်းနမူနာရှိတယ်ဆိုပါစို့, ထိုလူဦးရေ၏ဖြန့်ဖြူးမသိရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးသို့မဟုတ် Weibull ဖြန့်ဖြူးအဖြစ်မော်ဒယ်, ငါတို့ထံမှနမူနာလူဦးရေအဘို့အကောင်းတစ်ဦးမထိုက်မတန်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာများနှင့်မော်ဒယ်၏ quantiles ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အနေဖြင့် quantiles ကြှနျတျောတို့၏နမူနာဒေတာကနေ quantiles ကိုက်ညီခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်နိုင်ခြေဖြန့်ဖြူး ခြင်း, ရလဒ်တွဲအချက်အလက်များ၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က quantile-quantile ကြံစည်မှုသို့မဟုတ် QQ ကြံစည်မှုအဖြစ်လူသိများနေတဲ့ scatterplot, တွင်ဤဒေတာကိုကြံစည်။ ရလဒ် scatterplot အကြမ်းဖျင်း linear ဖြစ်လျှင်, ထို့နောက်စံပြကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာအတွက်အကောင်းတစ်လျောက်ပတ်သည်။
အဓိပ္ပာယ် Absolute Deviation ဆိုတာဘာလဲ
Regression Line နဲ့ညမညသဘောတရားမြှောက်ဖော်ကိန်း၏ slope
စာရင်းအင်းများတွင် percentile ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
စာရင်းအင်းများအတွက် Interquartile Range ကိုနားလည်ခြင်း
ပထမနှင့်တတိယ Quartiles ဘာတွေလဲ?
Frequencies နှင့်ဆွေမျိုး frequencies
ဖြန့်ဖြူးများ၏ Kurtosis ခွဲခြားဖို့ကိုဘယ်လို
အဆိုပါညမညသဘောတရားမြှောက်ဖော်ကိန်း calculate ကိုရန်ကဘယ်လို
သမိုင်း, Styles နှင့်ပိုတိုရီကန်ဂီတ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
"Remplir" (ဖြည့်ရန်) ၏ရိုးရှင်းသော conjugation Learn
Nonsynonymous မျိုးဗီဇသင်္ vs. ပြောရလျှင်
နှိုင်းယှဉ်လုပ်ငန်းရှင်များအသုံးပြုခြင်း Perl အတွက်တန်ဖိုးများနှိုငျးယှဉျဖို့ကိုဘယ်လို
သီချင်းများအတူထိပ်တန်း 10 ဦးပေါ့ပ်သီချင်းဆို
Elvis Presley ဆီမှာဆိုရင် Timeline ကို: 1971
အဆိုပါ Impost, အ Impost Block ကိုကို၎င်း, ပေသီး
Dwight ချို Fame ၏ကမ္ဘာ့ဖလားဂေါက်သီးခန်းမမှအရွေးခံရ
ဘယ်လိုအတော်များများသည်အမေရိကန်သမ္မတငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆု Won ဖူးသလော
Beginners များအတွက်အခမဲ့အွန်လိုင်း Drawing သင်ခန်းစာများ
Linearbandkeramik ယဉ်ကျေးမှု - ဥရောပစိုက်ပျိုးရေးတီထွင်ဆန်းသစ်မှု
America မှာ 8 Scariest နေ့ရက်များ
အဆိုပါ Track Pack ကို Ford ကား Mustang ပက်ကေ့
Hybrid ကိုစက်ဘီး - အားလုံး Hybrid ကိုစက်ဘီးအကြောင်း